UMotlanthe nejoka elisha kuKhongolose | Isolezwe
UMotlanthe nejoka elisha kuKhongolose
Isolezwe / 21 December 2012, 1:32pm /
President Jacob Zuma congratulates AU Chairperson Nkosazana Dlamini-Zuma after she was elected as member of ANC National Executive Council at the 53rd ANC conference held in Mangaung20/12/12
UMENGAMELI we-African National Congress (ANC), usememezele ukuthi akukapheli phakathi kwalo mbutho nobeyiPhini lakhe ongabuyelanga uMnuz Kgalema Motlanthe, njengoba esejutshwe emsebenzini omusha ngokushesha.
UMnuz Jacob Zuma, uvale ingqungquthela izolo ebusuku ngesimemezelo esisukumise itende lonke lahlokoma, sokuthi uMotlanthe, nguyena ozoqhuba uhlelo olube yisisombululo sengqungquthela lokulawula izinhlelo zokuqeqesha amalungu alo mbutho kule minyaka eyishumi ezayo nebizwa nge-Decade of a Cadre.
UZuma ubesevala le ngqungquthela eqale ngeSonto edolobheni iMangaung lapho kukhethwe khona ubuholi obusha kwabhabhadiswa nemigomo eminingi eyashaywa ngoJuni nonyaka eGoli.
UZuma uthi le ngqungquthela inqume ukuthi kube nokuqeqeshwa okunzulu kwawo wonke amalungu kaKhongolose kuzo zonke izinhlaka futhi nabo bonke labo abathunywe emikhakheni eyehlukene njengakuhulumeni nakomasipala, ukuze bahambisane nezimiso zalo mbutho.
“Le ngqungquthela ithathe isinqumo sokubuyekeza nokuvuselela i-ANC. Iphinde yathi kumele sikuqede nya ngokushesha ukungaziphathi kahle kwamalungu ethu kuzo zonke izinhlaka.
“Umkhuba wokusetshenziswa kwezimali, ukucwasana ngokobuhlanga, ukwethukwa kwabaholi be-ANC, yilaba abasebenzisana nabaholi sesibaxoshile embuthweni, nalabo abacabanga ukuthi i-ANC izolawulwa ngezinkantolo, sizokuqeda nya.
“Sifuna ukwakha amaqabane aqotho azongabi nenkohlakalo, azohambisana nezibopho zombutho. Yingakho nje sithe iminyaka eyishumi yokuqala izonikezelwa ekuqeqesheni amalungu nokwakhiwa kwesikole sezombusazwe. Kuyintokozo kimi ukumemezela kule ngqungquthela ukuthi obeyiPhini likamengameli we-ANC uMnuz Kgalema Motlanthe, nguyena ozosisingathela lolu hlelo,” kusho uZuma kwaduma ihlombe.
Uphinde wabonga kuMotlanthe ngokuthi avume ukulekelela uKhongolose ngokusingatha lolu hlelo athi kumele luqale maduze nje.
UZuma uthi ukusuka manje inhloso yesigungu esisha wukudweba izinhlelo zokusebenza izisombululo zale ngqungquthela. Uthe uzothi uphela lo nyaka lobe selukhona lolu hlelo.
“Ezinyangeni ezintathu ezizayo kumele sibe sesibumbe ikomidi elizobheka ubuqotho babaholi namalungu ombutho. Ekoteni yokuqala kumele lesi sigungu sibe sesakhe ibhukwana elizolawula ukuziphatha kwamalungu nabaholi be-ANC kuzo zonke izinhlaka namazinga. Uyothi uphela unyaka sobe sesilwakhile uhlelo lokusebenza lweminyaka eyishumi,” kusho uZuma.
Uphinde wathi ingqungquthela ithume isigungu ukuba ngenyanga ezayo sidingide udaba lophiko lwentsha ukuze lubuyele emgqeni.
Okunye akugcizelele wudaba lobunye nobumbano kuKhongolose. “Akumele bakhishwe inyumbazane abaholi ngoba besebenzise ilungelo labo elikumthethosisekelo we-ANC lokuthi njengoba bengamalungu banelungelo lokukhetha abaholi nokuthi baphakamise amagama abo ukuze akhethwe.
“Lena yinqubo yentando yabantu yangaphakathi kuKhongolose. Kumele siqale manje ukukhombisa ubunye. Ubunye ngeke buzenzekele kodwa budinga thina ukuba sisebenze kanzima ukuze sibuzuze,” kusho uZuma, maqede waphetha inkulumo yakhe ngenoni elisha eselithathe indawo yengoma abedume ngayo ethi Mshini wami, washaya avule ngayo le ngqungquthela ethi, “Yinde le ndlela esiyihambayo, kwasho uMandela kubalandeli bakhe, wathi sohlangana ngeFreedom Day.”